महेन्द्र र बीपी मिलेको भए के हुन्थ्यो होला ?
डा. कटक मल्ल
पुस १६, २०७४
राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल नहालेर संसदीय व्यबस्थालाई अगाडि बढ्न दिएको भए त्यसको परिस्थिती के हुनसक्यो ? सायद हामी जुन परिस्थितीमा छौं, त्यो भन्दा फरक परिवेशमा हुन्थ्यो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो देश बन्न नसक्नुको कारण महेन्द्र र बीपीको टकराव नै मुख्य हो । जुन प्रकारले महेन्द्रले बीपीप्रति व्यबहार गरे र संसदीय व्यबस्था खतम गरे, मुलुकका लागि त्यो दुर्भाग्य भयो । नेपाली इतिहासको आधुनिक कालखण्डमा महेन्द्र र बीपीको टकरावबाट देशको दुर्भाग्य भएको भन्न सकिन्छ ।
हुनत महेन्द्रले नेपालमा ठूलो काम गरे र राष्ट्रवाद स्थापित गरे भन्ने तर्क छ । तर यसमा मेरो वेग्लै दृष्टिकोण छ, राष्ट्रवादी धारणाको विकास पनि गरे र गोप्य सम्झौता पनि गरे । यो नै ठूलो खड्को बन्यो । दुर्भाग्य त पहिला पनि भएका थिए, जंगबहादुर राणाको पालादेखि कुनै पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कालगतिले मर्न पाएनन्, त्यो पुरानो इतिहास भयो । आधुनिक इतिहासमा बीपी महेन्द्र टकराव नै सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो । हुनसक्छ बीपीका पनि केही कमजोरी थिए होलान् । बढी दोष महेन्द्रको थियो, त्यहाँबाट सबै खेल सुरु भयो ।
मैले हमेसा भन्ने गरेको छु, तपाईं हामीले पुनः एक पटक ०१५ सालको कांग्रेसको घोषणा–पत्र पढ्नु पर्छ । जस्तो भन्नुसः प्रगतीशील कर व्यवस्था, दास प्रथाको उन्मुलन र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बर्गिय दृष्टिकोण । नेपालमा जतिसुकै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए पनि बर्गीय दृष्टिकोणको कुरा बीपीले जस्तो प्रष्ट ढंगले गरेका छैनन् । प्रगतीशील करको व्यबस्था गरिएको थियो, त्यही नै हो प्रगतीशील कर व्यबस्था । धेरै कमाउनेले बढी कर तिर्छ, बिपन्नले कम तिर्छ । त्यसले सम्पन्न र बिपन्न परिवारबीच समानता ल्याउने पुलको काम गर्छ । स्कडेविनियन देशहरु नर्वे, स्विडन, डेनमार्क र फिनल्याण्डले त्यही गरेको हो ।
बीपीले त्यो व्यवस्था केही वर्ष चलाउन पाएको भए देशको अबस्था फेरिन सक्थ्यो । मुख्यकुरा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको कुरा महत्वपूर्ण हो । राजनीतिक दल वा नेताले जनतालाई आश्वासन बाँडेर युज वा मिस युज गरे, तर जनताको आर्थिक हैसितमा सुधार आउन सकेन । जस्तो भन्नु न, कांग्रेसले पनि पछि रिभेन्ज (बदला) लियो, अहिलेको एमाले, रामराजा प्रसाद सिंह र माओवादीले पनि तिनै विपन्नलाई प्रयोग गरे । यसकारण म चाहिँ नेपाल बन्न नसक्नुको पछाडिको मुख्य कारण इन्फर्म डिस्कसन (सुसूचित छलफल) हुन नसक्नुलाई मान्छु । जस्तो ब्रिटेनमा भएको पछिल्लो राजनीति ।
०४६ पछि कहाँ चुक्यौं ?
पञ्चायत किन चुक्यो भन्दा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ थिएन, त्यहाँ केही विकेन्द्रीकरण र क्षेत्रिय विकासको कुरा भएको थियो । राजनीतिक विकास हुन नसके आर्थिक र सामाजिक विकास हुन सकेन, त्यहाँ चुक्नु स्वभाविक थियो । तर कांग्रेस किन चुक्यो भने, जब कांग्रेस सत्तामा आयो ०४७ पछि उनीहरुले आर्थिक बर्गिय दृष्टिकोण राख्न सकेनन् । कांग्रेसका नेताले ०१५ सालको आफ्नै घोषणा पत्र पपढेनन् वा बिर्षे र एकै पटक नवउदारवादी अर्थव्यबस्था अपनाउने भने ।
नवउदारवादी आर्थिक व्यबस्थाको बिरोध गर्नुपर्ने छैन, कुन अबस्थामा गर्ने ? सरकारी स्तरमा संचालित संस्थानलाइ निजिकरण गरे वा बिक्री गरे । जुता कारखाना, चिनी मिल, इटा कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना । नवउदारवादी अर्थव्यबस्थाले विपन्न बर्गले केही पाउन सकेनन्, माओवादीले त्यही बर्षलाई प्रयोग गरे । म प्रजातान्त्रिक विचारको सम्मान गर्छु । तर मैले कांग्रेसको सो नीतिको सधंै विरोध गर्दै आएको छु । गत बर्ष शेरबहादुर देउवासँगको अनौपचारिक भेटमा मैले यो कुरा भने, कांग्रेसले बर्गिय कुरा बिर्सियो भने कांग्रेसको भविष्य छैन ।
बीपीले त्यो व्यवस्था केही वर्ष चलाउन पाएको भए देशको अबस्था फेरिन सक्थ्यो । मुख्यकुरा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको कुरा महत्वपूर्ण हो । राजनीतिक दल वा नेताले जनतालाई आश्वासन बाँडेर युज वा मिस युज गरे, तर जनताको आर्थिक हैसितमा सुधार आउन सकेन ।
कांग्रेसले बिकसित देशको सिको गरेर नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्यो, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने युरोप अमेरिका र हाम्रो परिवेश फरक छ । हामीमा विपन्न बर्ग बढी छन् । उनीहरुले नव ल्याउन सक्छ । हामीकोमा पञ्चायको समयमा पनि मिश्रित अर्थ व्यबस्था थियो, जस्तो कि साझा यातायात । भलै असल नेतृत्व हुन नसक्दा त्यो चल्न सकेन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत बिषयमा राज्यको दायित्व हुन्छ, कांग्रेस सत्तामा आएपछि उनीहरुले यसको जिम्मा सरकारले लिनुपथ्र्यो । दोस्रो विश्युपछि जुन लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएको छ नि, प्रगतीशील कर व्यबस्था र बर्गिय दृष्टिकोण एक अर्काका लागि सम्पुरक हुन् । धनी र गरिव बीचको खाडल बढ्यो ।
नवउदारवादी आर्थिक व्यबस्थाका कारण चीनमा पनि धनी र गवि बीचको दूरी बढेको छ । भारतमा पनि गरीवहरुको अबस्थामा सुधार आएको छैन, किशानहरु आत्महत्या गरिरहेका छन् । आफूमा राजनीतिक रुपमा चेतना आएदेखि म हमेसा भनिरहेको छु, यदी देशलाई स्थायित्व दिने हो भने प्रगतीशील कर व्यबस्था हुर्नै पर्छ र बर्गिय आर्थिक दृष्टिकोण हुर्नैपर्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन ।
बर्गिय दृष्टिकोण नै प्रधान
यो मुलुकका वामपन्थी दलको उदय बर्गिय समानताको मुद्दालाइ लिएर भएको थियो । बिडम्बना भन्नुपर्छ अहिले कुनैपनि दल बर्गिय दृष्टिकोण छैन, सबले छाडे । कुनै दलले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा बर्गिय कुरा राखेका छैनन्, भेग कुरा गरेर भन्छन, तर त्यो ठग्नका लागि मात्र हो । तपाइले कति टेयाक्स लगाउने ? अहिले जुन बृद्धबृद्धालाइ पैसा दिने काम भएको छ, यो बर्गिय दृष्टिकोण होइन, यो पपुलिष्ट नारा मात्र हो । बृद्धबृद्धालाइ बृद्धभत्ता दिने निर्णयको स्वागत गर्छु, त्यसलाइ दीगो नीति भन्न सकिँदैन ।
राजनीतिक मोडेलको कुरा गर्नु हुन्छ भने पहिला निर्णय गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको कुन खेल खेल्न चाहानुहुन्छ ? संसारमा अहिले मुख्यतः दुईओटा राजनीतिक व्यबस्था सफल देखिएका छन्, राष्ट्रपतीय व्यवस्था र संसदीय व्यवस्था । कटवाल काण्ड (प्रधानसेनापति रुकमागत कटवाल बर्खास्ती ) देखि यता मलाई बडो शंका लाग्न थालेको छ । कटवाल काण्ड हुनुभन्दा पहिला संसदीय व्यबस्था जस्तो देखिएको थियो, कटवाल काण्डपछि अचानक नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली जस्तो देखियो र कन्फुजन बढ्यो । र यसको जिम्मेवारी प्रचण्ड, रामबरण र कटवालले लिनुपर्छ ।
विडम्वना मान्नु पर्छ, माओवादीको डिक्लायन्टमेट त्यहाँबाट सुरु भयो । बीपी कोइराला र महेन्द्रको टकराब जस्तै अर्को ठूलो टकराव प्रचण्ड र कटवालबीच भयो । त्यो बेला खेलको नियम महेन्द्रले तोडेका थिए । यसपटक तीनै जनाले तोडे, प्रचण्डले पनि त्यो गर्नु नहुने थियो, रामवरण यादव र कटवालले पनि । खेल संसदीय गर्ने भनिरहेका छन्, तर व्यवहार आर्कै भयो ।
अहिले पनि शासकीय व्यबस्थामा त्यस्तै देखिएको छ । तपाई फुटबल खेल्ने कि भलिबल ? यदी फुटबल खेल्ने हो भने खुट्टाले खेल्नुस्, भलिवल हो भने हातले । हामी अझै पनि त्यसमा रोमल्लिएका छौ । अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा देखिएको झमेला पनि खेलको नियम नमान्दा हो । हामी अमेरिकी मोडलमा जाने हो कि ब्रिटिस मोडेलमा जाने ? हामी कहिलै मौलिक मोडेल बनाउन सकेनौ । अरुको मोडल ‘ट्रान्सप्लान्ट’ र ‘इम्प्लान्ट’ गर्न कोशिष गरेका छौ । बाहिरको मोडल यहाँ हुबहू लागू हुन सक्दैन । नेपालमा केही नेताहरुले अमेरिकी मोडेलको राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गरेका छन्, अमेरिकी मोडेल यहाँ इम्पाल्ट गर्न सक्दैनौं । जबसम्म राजनीतिक संस्कृति जस्ताको तस्तै रहेर राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू हुन सक्दैन । खेलको नियम नमानेपछि भोली राष्ट्रपति निरंकुश भयो भने के गर्ने ?
यो मुलुकका वामपन्थी दलको उदय बर्गिय समानताको मुद्दालाइ लिएर भएको थियो । बिडम्बना भन्नुपर्छ अहिले कुनैपनि दल बर्गिय दृष्टिकोण छैन, सबले छाडे । कुनै दलले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा बर्गिय कुरा राखेका छैनन्, भेग कुरा गरेर भन्छन, तर त्यो ठग्नका लागि मात्र हो ।
सुधारिएको संसदीय व्यबस्था सफल होला ?
नयाँ संविधान बने पनि संविधान निर्माणमा इन्फमर्ड डिस्कोर्स (सुसूचित छलफल) बाट बनेको होइन । डिलिज्युन (भ्रम) के छ भने संघात्मक व्यबस्थामा गयौं । भारतको उदाहरण देखाएर यहाँ संघीयताको कुरा हुन्छ । बास्तममा भारतको संघीय व्यवस्था होइन । नर्वे, स्विडन, फिनल्याण्ड एकात्मक राज्य हुन् । स्विडनमा २५ काउण्टी र ३ सय वा म्यूनिसीप्यालिटी छ, कुनै पनि समम काउण्टी र म्यूनिसीप्यालिटी बिघटन गर्ने अधिकार छैन । जबकि भारतमा आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले राज्य सरकारलाई बिघटन गरेर राष्ट्रपतीय शासन लगाउन सक्छ । अहिले नेपालको संविधानको परिकल्पना पनि त्यही छ ।
महत्वपूर्ण बिषय स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा हो । स्केडिनीयन मुलुकमा हरेक काउण्टीको आफ्नो झण्डा हुन्छ, त्यसको जनावर हुन्छ, सिम्वोल र जनावर हुन्छ । यहाँ माग हुनुपथ्र्यो । स्थानीय स्वायत्त शासनको माग हुनुपथ्र्यो, त्यो कहिल्यै पनि भएन । अलि पहिलाको कुरा गरौं, जतिवेला म नेपालमा वकालत गर्थे, पञ्जायत गयो । गाउँ र नगर पञ्चायतको ठाउँमा विकेन्द्रीकरण भनेर गाउँ विकास समिति र नगरपालिका भनेर अर्को ठूलो गल्ती गरे । पूर्ण रुपमा स्थानीय सरकारको अधिकार दिएको भए यति ठूलो समस्या हुने थिएन । अहिले प्रस्तावित संघीयतामा पनि चार तहको संरचना हुन्छ ।
सयवटा प्रान्त बनाऔ
यदी मेरो कुरा सुन्ने हो भने, हुनत अलि भेग कुरा पनि छ । यो कुरा यहाँका नेपालीलाइ पच्दैन होला, तर आफ्नो बिचार भन्छु । नेपालका सबै गाबिस र नगरपालिकालाई स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकार दिनुपर्छ । म त अझै भन्छु नेपालमा सयवटा प्रान्त बनाऔं । विभिन्न तर्क सुन्छु, त्यति धेरै प्रदेश धान्न सक्दैन भनेर । कस्ले डिटरमाइन गर्ने त्यो कुरा ? कसको दृष्टिकोणबाट ? तपाइ एउटा राज्य मन्त्रीलाई करोडौंको खर्च गर्नु हुन्छ भने धान्न सक्नु हुन्न, तर प्रान्तको मन्त्री साइकल चढेर पनि जान सक्छ ।
तपाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुन्छ, यही हो बर्गिय दृष्टिकोण । तपाई माउण्ट एभरेष्टबाट तराइ हेर्नु हुन्छ कि तराइवाट माउण्ट एभरेण्ट ? म चाही बिपन्न बर्गको दृष्टिकोण बाट हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । सम्पन्न व्यक्तीको पैसा ल्याएर विपन्नलाइ बाढ्नु पर्छ भन्ने रविनहूड मोडल होइन ।
स्केण्डिनेभियन मुलुकमा पनि सबै काउण्टी आत्मनिर्भर छैनन्, उनीहरुले २५ प्रतिसत कर आफैं लिन पाउँछन्, नपुगेको केन्द्रले दिन्छ । मैले यही भनेको हो, स्थानिय स्वायत्त शासनको कुरा । तपाईंलाई प्रश्न उठला भोली झापाको काउण्टीले अर्घाखाँची वा दार्चुलाको काउण्टीलाई किन सहयोग गर्ने ? त्यस्तो भावना आए राष्ट्रिय एकता हुँदैन । अहिलेको संविधानमा धेरै कमजोरी देखिरहेको छु, नत स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गरिएको छ, न संघात्मक । यसैमा सन्तुष्ट हुने हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।
(स्विडनको स्कटहोम विश्वबिद्यायलका नेपाली प्राध्यापक डा मल्लसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पुस १६, २०७४ मा प्रकाशित
बर्दीवाला ‘सुन तस्कर’ आरोपितको फ्लाइङ् किक
राजमार्ग यातायात व्यवसायीको दाइजो होइन
बादललाई खतरा नेकपाभित्र कि बाहिरबाट ?
बीपीले महेन्द्रसँग आत्मसमर्पण नै गर्नुभएको हो
धरहरा ठड्याउन भीमसेन थापा नै आउनुपर्ने हो ?
प्रचण्डलाई भावुक बनाउने अन्तिम पत्र
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त राजविराज-उपचारका क्रममा एक बिरामीको आज मृत्यु भएपछि यहाँस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ । बिहान उपचारका लागि भर्ना भएका छिन्नमस्ता गाउँपालिका&nda...
डा गोविन्द केसी कम्युनिष्ट विरुद्ध लागे: योगेश भट्टराई
जेल गए श्रीमतीलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने श्रीमान्
सप्तरीमा प्रहरी हवल्दारमाथि गोली प्रहार
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्षदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ
संविधानले जनतालाई अधिकार दिएको छः प्रचण्ड